Arsenal oo ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo Patrick van Aanholt
Home Horyaalka Ingiriiska Arsenal oo ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo Patrick van Aanholt
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay miisaameyso inay u dhaqaaqdo daafaca Crystal Palace Patrick van Aanholt .
Bixitaankii Sead Kolasinac ayaa ka dhigtay inay Gunners heysato fursado ay ku heysato daafaca bidix, halka Kieran Tierney uu dhawaanahan dhaawacyo qabay uu arkay Cedric Soares oo la geeyay aaggaas.
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa dhawaan sheegay in kooxdiisu ay suuqa ka raadin karto daafac bidix oo cusub ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, ciyaaryahanka Southampton Ryan Bertrand ayaa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay The Mirror , Van Aanholt ayaa haatan u soo muuqday bartilmaameed, iyadoo 30 jirkaan uu diyaar u yahay qiimo jaban maadaama qandaraaskiisa Selhurst Park uu dhacayo xagaagan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Netherlands ayaa kasoo muuqday in kabadan 200 oo jeer Premier League laakiin wuxuu boos ka waayay kooxda Roy Hodgson todobaadyadii lasoo dhaafay, kaliya wuxuu kasoo muuqday mid kamid ah lixdii ciyaar ee ugu dambeysay Palace.
Van Aanholt ayaa 123 kulan u saftay Eagles tan iyo markii uu ka yimid Sunderland sanadkii 2017.
Previous articleManchester United oo bartilmaameed ka dhiganeysa Daafaca Sevilla ee Jules Kounde
Next articleBarcelona oo caqabad ku tahay heshiiska Messi